Muxuu ka yiri David Silva bandhigii cajiibka ahaa uu Brahim Díaz ka sameeyay kulankii xalay ee Fulham? – Gool FM
Muxuu ka yiri David Silva bandhigii cajiibka ahaa uu Brahim Díaz ka sameeyay kulankii xalay ee Fulham?
Dajiye November 2, 2018
(Manchester) 02 Nof 2018. Khadka dhexe kooxda Manchester City ee David Silva ayaa amaanay xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Brahim Díaz, kadib markii Sky Blues uu ka caawiyay guushii ay kaga gaareen kooxda Fulham tartanka EFL Cup.
19 jirkan ayaa wuxuu bandhig cajiib ah ka sameeyay kulankii xalay ee EFL Cup ay kula ciyaareen kooxda Fulham, kadib markii uu dhaliyay 2 gool ay Manchester City guusha ku gaartay, wuxuuna amaan xoogan ka helay macalinkiisa Guardiola kadib mrkii uu kulanka soo idlaaday.
Hadaba David Silva oo ka maqnaa kulankii xalay EFL Cup ay ku wada ciyaareen kooxda Fulham ayaa kusoo qoray bartiisa “Twitter-ka” qoraal uu kaga hadlayay da’ayarka Brahim Díaz.
“Brahim Díaz waa mustaqbalka xulka qaranka Spain, kadib bandhigiisa kulankii Fulham iyo 2-dii gool uu dhaliyay”.